Ekuphakameni | eNanda Online
Tag Archives: Ekuphakameni
Ekuphakameni – Ukuthuthukiswa kwamagugu aseNanda
Ihumushwa nje “ngendawo yokujabula” lendawo eyayikhululekile futhi idumile yadayiswa ngo 1913 kumlungu umnikazi wayo ongomunye wabalandele bakampholofethi u-Isaiah Shembe. Lokhu kuthatheka njengomnyombo wamaNazarene ukuhlukana nokujabula kwenkolo eqhubekayo enyusa izinga lezakhiwo zakudala, indawo kanye nezindlela yokuhamba ezenziwe ngendlela yabantu ngakhona ‘ipharadise’ indawo evulekile yokuthandaza engafani nesibaya. Abesilisa nabesifazane bayahlukaniswa. Kuyinhloso ukuqaphela izipiliyoni zezivakashi ekukholweni komdabu wamaNazarene.
Ukwenza kangcono ukuhawukela kokholo endaweni
Ukuchaza ukuhlukana nokuthula ulwazi ngezindlela zokuhamba
Ukubonakalisa impendulo yenkolo yase Africa
Ukufaka inhlonipho kumpholofethi ekuqaleni nasekugcineni
Ukuthuthukisa indawo yonke ukuhlalisa izivakashi eziningi.
Kunezibonelo ezinhle zamagugu angabonakali, futhi nezakhiwo ezingabonakali kulendawo, okufana namatshe apendwe ngokumhlophe asho ‘izindonga’ inkanyezi yoqgozi, isivivane nangokunjalo nemibiko ekhulunywa emicimbini
Ukuqopha umlando ngendlela nokunika izivakashi nezifundiswa imvumo.
Ukunika imvumo ofakazi bemigido ekhethekile.
Ukuhlalisa izivakashi endaweni
Kunamapulani akhona ukwenza indawo enkulu ivulekele abasemadolobheni ukuthuthukisa izindlu zokuhlala kanye nezikole.
Ucingo olubiyile njengamanje endaweni liwumphumela wengcindezi phakathi kwenhlangano kodwa futhi kunethemba lokuthi kuzolungiseke maduzane .
Ukunganakwa kwezakhiwo zakudala njengamanje kufanelwe kushitshwe kube ngendlela ehloniphekile ukuxhasa abaphathi bamagugu. Lokho kudala inkinga ngoba isoto lona lavumelana ngemithetho yokungalimazi izinto zamasiko. Isibonelo, amaqhugwana omdabu amane enza umsamo enzela amadlozi eduze kwe MR25 eba sendlini ewurawudi (noma uguqasithandaze).
Ukuziphatha kwezivakashi ukuthola imvumo endaweni, indlela yokuqgoka nokuhlukaniswa kobulili kabaulekile.
Ukuthuhukiswa komhlaba ongenalutho kumele kwenziwe ngozwelo, futhi okuchazayo okuwumnyombo wenkolo endaweni kubuyiselwe.
Ekuphakameni intuthuko eqanjiwe
iqoshwe ngu eNanda	in Amasiko & Amagugu, Ezokuvakasha, Umlando & Nesikukhumbulayo	0 imibono
Izithombe zomlando zika Isaiah Shembe
Killie Campbell Collections, Durban
iqoshwe ngu eNanda.co.za	in Umlando & Nesikukhumbulayo	5 imibono